The Ab Presents Nepal » अब भारतबाट किन्नु पर्ने बिजुलिमा रोक लगाउँदै कुलमान: सम्मान स्वोरुप सियर गरौँं !
अब भारतबाट किन्नु पर्ने बिजुलिमा रोक लगाउँदै कुलमान: सम्मान स्वोरुप सियर गरौँं !
यो समाचार सबैका लागि जति राम्रो छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण पनि छ । यति मात्र कहाँ हो र, नेपालमा भएका उद्योग धन्दाका लागि समेत कुलमानले समर्पित लाइनहरु प्रदान गर्ने भएका छन । देशको विकास गर्न एकजना मात्र लागि परेर हुँदैन । कुलमान जस्ता बुद्धिमानी व्यक्तिलाई सलाम छ ।लोड्सेडिङ्ग त नेपालमा एउटा संस्कृति जस्तै भैसकेको थियो । यस्तो रितिलाई परिवर्तन गर्ने कुलमानका लागि एक सियर त गर्नै पर्छ । सक्दो सियर गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला । सलाम कुलमान घिसिङलाई ‘।